कामदार भिषामा अमेरिका जान अनलाईन आवेदन आईतबारदेखि खुल्ने, यस्तो छ प्रक्रिया ! - Nepalese Timesकामदार भिषामा अमेरिका जान अनलाईन आवेदन आईतबारदेखि खुल्ने, यस्तो छ प्रक्रिया ! - Nepalese Times
आन्दोलनको स्वरुप फेराैँ, नारा लगाउँदा र सिठी फुक्दा एकैपटक धेरैमा कोरोना फैलन्छ: डा. पाण्डे4हप्ता अघि
आजदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागु, यी हुन् जान पाईने र नपाईने ठाउँहरु4हप्ता अघि
तिलोत्तमा हत्याकाण्ड : अभियुक्तले दिए यस्ताे बयान 1 महिना अघि
भारतबाट फर्किएर बैतडी क्वारेन्टिनमा बसेका अर्का ३१ वर्षीय पुरुषकाे पनि मृत्यु 1 महिना अघि
कोरोना संक्रमण चीनबाट नभई फ्रान्सबाट सुरु भएको खुलासा (रिपोर्टसहित) 1 महिना अघि
विभेद नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि छ – गृहमन्त्री थापा 1 महिना अघि
एउटा सूक्ष्मजीव जसले मलेरिया रोग लगाउने परजीवी सार्ने क्रम बन्द गरिदिन सक्छ 1 महिना अघि
आज थप २२६ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १७९८ पुग्यो 1 महिना अघि
कामदार भिषामा अमेरिका जान अनलाईन आवेदन आईतबारदेखि खुल्ने, यस्तो छ प्रक्रिया !
नेप्लिज संवाददाता१७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १४:३७ (4 महिना अघि) ३०२ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । अब अमेरिकामा पनि वर्किङ भिसामा जान मिल्ने भएको छ । कामदारका लागि अमेरिकाले डीभी लोटरी
जस्तै आवेदन लिएर भिसा दिने भएको हो । जुन भिसा अमेरिकाले खुल्ला गरेको छ । एचवान बी भिसा खुल्ला भएसँगै यसको अनलाइन दर्ता पनि सुरु हुने भएको छ ।अनलाइनमार्फत दर्ता अवधि मार्च १ को दिउँसो १२ बजेबाट सुरु हुने युएससीआईएसले घोषणा गरेको छ ।
नेपाली समय अनुसार दिउँसो १२ बजेदेखि दर्ता खुल्ने र मार्च २० दिउँसो १२ बजेसम्म दर्ता गर्न सकिने युएससीआईएसले जनाएको छ । आर्थिक बर्ष २०२१ का लागि खुल्ने उक्त भिसाका लागि तोकिएको अवधिभित्र आवेदक र उनीहरुका प्रतिनिधिहरुले आवेदक र लाभग्राहीको विवरण भरेर अनलाइनमार्फत दर्ता गराउन सक्नेछन् । हरेक दर्ताका लागि युएससीआईएसले कन्फर्मेशन नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । उक्त नम्बर रजिस्ट्रेशन ट्रयाक गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।तर उक्त नम्बर केस नम्बर नभएका कारण युएससीआईएसको केस स्टाटस हेर्न भने प्रयोग हुनेछैन ।
कामदार भिसा एचवानबीमा दर्ता गर्नका लागि १० डलर दर्ता शुल्क तिर्नुपर्नेछ । गत नोभेम्बरमा अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले अन्तिम नियम प्रकाशित गर्दै कामदार भिसा एचवानबीका लागि दर्ता शुल्क १० डलर लिने जानकारी दिएको थियो ।यो बर्षदेखि अमेरिकी सरकारले एचवानबी कामदार भिसामा नयाँ नियम ल्याएको हो । विद्युतीय रुपमा दर्ता हुने बाहेक अरु नियम सन् २०१९ देखि नै लागु गरिएको थियो ।
यसैबर्षदेखि लागु नयाँ नियमले अमेरिकन डिग्री नलिएका विदेशी कामदारलाई अमेरिका आउन थप मुस्किल बनाएको छ ।
तर अमेरिकन डिग्री होल्डरका लागि भने विगतको तुलनामा निकै सहज बनाएको छ । अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा नै डिग्री लिएकाहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरी कामदार भिसाको नयाँ नियम ल्याएको हो । एचवानबीमा दर्ता भएका श्रमिकको आवेदनहरुलाई लोटरीको माध्यमबाट छनोट गरिने छ । त्यसपछि छानिएका आवेदनहरुमध्येबाट थप अन्य प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ ।
श्रमिकले भने भिसाका लागि भने रोजगारदाता कम्पनी खोजेर आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । आवेदनबाट छनौटमा परेका श्रमिकले भने अमेरिकी रोजगारदाता कम्पनीमा सिधै सम्पर्क गर्ने सकिने अमेरिकाले जनाएको छ ।
केही त्यस्ता सर्प हुन्छन्, जो हावामा उड्न सक्छन्
सिन्धुपाल्चोकमा एकाविहानै दुईजनाको मृत्यु
दैलेखमा अनौठो घटनाः बैठकमा बोल्दाबोल्दै मृत्यु
कृषि अनुदानमा भ्रष्टाचार : मरेकाको नाममा अनुदान, किर्ते भरपाई पेश गरी रकम हिनामिना
एकाविहानै दु:खद खबर ! थप एक काेराेना स‌ंक्रमितकाे मृत्यु
बिरामी हात्ती हिँडाइएकोमा विरोध, हात्ती हिडाएकोबारे छानविन गर्न मन्त्रीको निर्देशन
महराले सुटुक्क बुझाए सभामुख पदबाट ‘दोस्रो राजीनामा’ पत्र
रोशनीको कोठामा महरा जाँदै गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले प्रचण्ड र ओलीले हेरेका थिए
सोती घटना : सन्दीप विकको शव पनि फेला, मृतककाे संख्या ५ पुग्याे
कानुनी जानकारहरु भन्छन्-‘यौन दुर्व्यवहारमा पीडितले बोली फेरे पनि अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन’
आफ्नै आमाकाे हत्या गरी ३१ वर्षीय जीवन लिम्बूले गरे आत्महत्या
तेत्तीस किलो सुन काण्ड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
बोल्दाबोल्दै मृत्यु भैरबी गाउँपालि
अभिनेत्री बस्नेतलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि, फेसबुकमा लेखिन् यस्ताे स्टाटस
नवराजकी आमा भन्छिन्– काफल खाएर आउँछु भन्ने शब्द नै अन्तिम भयो
तिलोत्तमा हत्याकाण्ड : अभियुक्तले दिए यस्ताे बयान
मिशन अस्पतालमा अर्का कोरोना संक्रमितको पनि मृत्यु (पछिल्लो अपडेटसहित)
दर्ता नं Update Soon...